School Planner 3.14.20 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 3.14.20 လြန္ခဲ့ေသာ3ပတ္က
Application မ်ား ပညာေရး School Planner
School Planner ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
ကျောင်းစာအုပ်အစီအစဉျသငျသညျကျောင်းသားတစ်ဦးအဖြစ်သင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစုစည်းနှင့်ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာအရာအားလုံးကိုရှိကူညီရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ပါသည်သောသူအပေါင်းတို့သည်အသက်အရွယ်မရွေးကျောင်းသားတစ်ဦးနေရာလေးကို App ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျမူလတန်းကျောင်း, အထက်တန်းကျောင်းသို့မဟုတ်ကောလိပ်တက်ရောက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖွစျစေ, ဤသူသည်သင်တို့အဘို့အ app ကိုပါ!
နှိမ့်ချရေးသားခြင်းအိမ်စာ, တာဝန်တွေ, စာမေးပွဲနှင့်သတိပေးချက်များရိုးရှင်းပြီးအစာရှောင်ခြင်းနှင့်နေ့စဉ်အကြောင်းကြားစာများဖြစ်ပါသည်သင်သည်တစုံတခုကိုဘယ်တော့မှမေ့ကူညီပေးပါမည်။ Built-in ပြက္ခဒိန်အလွန်အမင်းကြောငျးသားမြား၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဘို့ optimized နှင့်သင်ပိုမိုလွယ်ကူစွာသင့်ရဲ့ဖြစ်ရပ်များနှင့်လှုပ်ရှားမှုများစီမံခန့်ခွဲခွင့်ပြုထားပါသည်။
လက်မှာအမြဲသင့်ရဲ့အချိန်ဇယားနှင့်နေ့စဉ်အချိန်ဇယားကိုသိမ်းဆည်းထားပါနှင့်အညီသင့်ရဲ့လေ့လာမှုတွေစီစဉ်ထားသည်။ ထိုအချိန်ဇယားအလွန်အမင်းစိတ်ကြိုက်ဖြစ်ပါတယ်: သင်တစ်ဦးချင်းစီဘာသာရပ်မှကွဲပြားခြားနားသောအရောင်များကို assign နှင့်ပြက္ခဒိန်၌ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ဖြစ်ရပ်များကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
သင်၏ဆရာ '' အဆက်အသွယ်အင်ဖို Save နှင့်၎င်းတို့၏ဖုန်းနံပါတ်များ, ရုံးနာရီနှင့်အီးမေးလ်လိပ်စာများစည်းရုံး။
သင်၏ကိရိယာများအားလုံးနှင့်သင်၏အစီအစဉ်များတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ခြင်းနှင့် Google Drive ကိုအပေါ်သင့်ရဲ့ဒေတာကို back up ။
Google ရဲ့ပစ္စည်းဒီဇိုင်းအားဖြင့်မှုတ်သွင်းအဆိုပါလှပခေတ်မီဒီဇိုင်း, ထိုးထွင်းသိမြင်နှင့်၎င်း၏တိုင်းရှုထောင့်မှာရှိတဲ့အကြိုးအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုစေသည်။
- အိမ်စာ, စာမေးပွဲ, သတိပေးချက်များဘို့အစီအစဉ်
- လှပသော, အရောင်အသွေးစုံလင် themes များ
- Google Drive ကိုအပေါ် Backup ကို
- တာဝန်တွေများအတွက်အသိပေးချက်များ, စမ်းသပ်မှုများ, သတိပေးချက်များ
- အဆင့်၏စီမံခန့်ခွဲမှု, အမှတ်အသားများ, ဘာသာရပ်များ
School Planner အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
School Planner အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
School Planner အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
School Planner အား အခ်က္ျပပါ
matheusdbs စတိုး 1.83k 418.28k
School Planner ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း School Planner အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 3.14.20
ထုတ်လုပ်သူ Andrea Dal Cin
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://github.com/andreadalcin/School-Planner/blob/master/README.md
လက်မှတ် SHA1: 62:FF:98:7B:98:FF:EC:DA:82:3D:DB:68:C6:2D:FA:1A:FA:A4:47:2F
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Andrea Porfiri Dal Cin
အဖွဲ့အစည်း (O): Daldev
နယ်မြေ (L): Milan
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): Italy
School Planner APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ